Praiminisitra Ntsay Christian : Mandripaka ny harem-pirenena -
AccueilSongandinaPraiminisitra Ntsay Christian : Mandripaka ny harem-pirenena
Praiminisitra Ntsay Christian : Mandripaka ny harem-pirenena
Tsy takona hafenina toy ny vay an-kandrina. Izay no azo ilazana ny fomba amam-panaon’ny praiminisitra Ntsay Christian sy ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta hatramin’ny nipetrahan’izy ireo tamin’ny toerany amin’ny maha olom-panjakana ambony azy ireo. Miha mahery vaika amin’izao fotoana izao ny fandripahana ny harem-pirenena satria dia revo ary takona ao anatin’ny fotoam-pifidianana avokoa ny rehetra ka tsy mahatsikaritra, na inona na inona intsony.
Hany ka nanaovan’ny Alliance Voahary Gasy (AGV) antso avo mihitsy ankehitriny ny fampitsaharana ny fitrandrahana sy fandripahana tsy ara-dalàna ireo harem-pirenena. Raha ny filazan’izy ireo tokoa mantsy, manomboka ripaka tsikelikely ny ala amin’ny fanaovana arina tsy ara-dalàna ao Tsaramandroso, izay toerana manakaiky ny Valan-javaboahary ao Ankarafantsika. Eo ihany koa, ary goavana ny fitrandrahana hazo sarobidy ao amin’ny Tahirin-javaboaharin’i Menabe Antimena sy ny “Allée des Baobabs” ao Morondava, izay maharipaka hatrany amin’ny 50 ha isan’andro. Ny fandorana ny Valan-javaboaharin’i Ranomafana ka ahafanan’ireo mpitrandraka hanapahana ireo hazo sarobidy ao. Ny fitrandrahana safira ao Didy, anatin’ny faritra voaaro, ny fanaovana arina ny hazo ao amin’ny Valan-javaboaharin’Andasibe, sns.
Matoa tokoa misy manao fitrandrahana amin’ireny toerana ireny ary vao mainka aza miseholany izany dia avy amin’ny Fanjakana ihany. Misy tombontsoa manokan’ireo olom-panjakana ambony to any praiminisitra Ntsay Christian sy ireo mpikamban’ny governemanta misahana izany izao fandripahana tsy ara-dalàna ary miseholany eto amin’ny firenena izao. Izany hoe, ny Fanjakana amin’ny ankapobeny mihitsy no manome vahana ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny harem-pirenena, amin’izao fotoana izao.
Hita ary tsapa, araka izany, fa miverina ny gaboraraka eto amin’ny firenena noho ny hafitsoky ny praiminisitra Ntsay Christian sy ny governemanta tarihiny amin’ny fitiavana tombontsoa manokana.
“Scaling Up Nutrition” na SUN. Isan’ireo firenena 51 mpikambana eo anivon’ity hetsika iraisam-pirenena miady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo ity i Madagasikara. Efa manodidina ny dimy taona isika izao no mpikambana feno eo anivon’ny SUN. Araka izany, ...Tohiny